C/raxmaan C/shakuur Warsame Oo Iskiisa Masaafuris U Galay Oo Dib u soo Noqonayo Si .. - Latest News Updates
C/raxmaan C/shakuur Warsame Oo Iskiisa Masaafuris U Galay Oo Dib u soo Noqonayo Si ..
Guddoomiyaha Xisbiga Wadajir, C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah DFS ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi Khaas ah oo uu siiyey Wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalladda Nairobi.
Siyaasigaasi oo Musaafuris iskiisa ah ku jooga Kenya waxa uu ku eedeeyey Dowladda Madaxweyne Maxamed C/llaahi Framaajo inay doonayso inay Somalia dib ugu soo celiyaan maalmihii madoowaa ee hore, waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu intaasi ku daray inay Dowladda Federalka tahay gebi ahaan tahay mid doonaysa inay dib u soo celiyaan Aragtiyihii Madaxweynihii hore ee Somalia, AUN Maxamed Siyaad Barre, waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, C/raxmaan C/shakuur oo ka mid ahaa Murashaxiintii Madaxweyne ee la tartamay Madaxweyne Farmaajo waxa uu Wareysigiisa ku xusay inuu qorsheynayo inuu maalmaha soo socda dib ugu soo laabto magaalladda Muqdisho, si uu u xuso Sannad-guuradii 1-aad ee ka soo wareegtay markii ay DFS xabsiga dhigeen bishii December 19-dii ee sannadkii hore, iyadoo Hawlgalkii isaga lagu soo xirayey lagu dilay Dareewalkiisii iyo 4 ka mid ah Ilaaladiisa Khaaska ah.
“Waxaan ahay Hoggaamiye Xisbi mucaarad ku ah DFS. Waxaa I soo weerartay in ka badan 20 Saraakiil Amniga, kuwaasi oo dilay 5 ka mid ah Shaqaalaheeda” ayuu yiri Siyaasigasi oo la hadlay Wargeyska The Standard.
Waxa uu intaasi ku daray inuu dhowr maalmood ku soo qaatay Xabsiga Dhexe ee Muqdisho, wuxuuna ku dooday inaysan Saraakiisha Sirdoonka DFS aysan Maxkamadda ku soo bandhigin xitaa hal caddayn oo muujinaya Dembiga ay isaga u soo xireen, waa sida uu hadalka u dhigay.
Laakiin, Wargeyska Standard waxa uu qoray in C/raxmaan C/shakuur lagu soo eedeeyey inuu Dhaqaale ka helo daalal Shisheeye, si uu deganaansho la’aan uga abuuro Somalia.